China Polypropylene U-udi FIBC nnukwu akpa ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya Wode
A na-eji akpa anụ ahụ atọ arụ akpa FIBC U-panel, nke kachasị ogologo na-etolite ala na akụkụ abụọ na-emegide ya na-etinye ogwe abụọ ọzọ n'ime ya iji mepụta akụkụ abụọ ndị ọzọ na-emegide iji nwee U-udi n'ikpeazụ. Akpa U-panel ga-ejigide akụkụ square mgbe itinyechara ihe buru ibu, nke ka mma na mgbagha.
Ihe owuwu U-panel na-enwekarị loops n'akụkụ ọmarịcha maka ịkwanye ngwaahịa dị iche iche ma nwee nnukwu mbuli elu. Ọ bụ atụmatụ ama ama maka nnukwu ngwaahịa. Akpa nnukwu U-panel dị maka ibuga ntụ ntụ, pellete, granular na flake nwere ibu dị n'agbata 500 ruo 3000kgs.
Nkọwa nke FIBC U-panel
• Akwa ahụ: 140gsm ruo 240gsm nwere 100% polypropylene na-amaghị nwoke, ọgwụgwọ UV, ihe na-egbochi uzuzu, ịgbapụta mmiri, mgbochi mmiri dị na nhọrọ;
• Njuputa dị n'elu: elu isi, elu elu (uwe mwụda), elu mepere emepe dị na nhọrọ;
• Akwadoro anya maka akpa Jumbo ka akwadoro
• stkwà ndị China, akwa agbụ gbara okpukpu abụọ, akwa mkpọchi karịrị akarị dị na opition
Kedu ihe kpatara ịhọrọ WODE mbukota U-panel FIBCs
Nkwakọ ngwaahịa WODE na -etinye onwe ya dịka onye ndu nkwakọ ngwaahịa na onye nrụpụta ihe na ụlọ ọrụ FIBC. Sistemụ njikwa njikwa siri ike yana imepụta ihe dị mma na -eweta ịdị mma oge niile. FIBC nke U-panel nke ngwugwu WODE mepụtara bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ka ejiri ya rụọ nnukwu ibu. Ka ọ dị ugbu a, otu ndị ọkachamara nwere ike nyochaa akpa U-panel na-adịgide adịgide na nchekwa iji gboo mkpa pụrụ iche gị.
Osote: Cross cross loops tubular FIBC jumbo akpa
Nke gara aga: Akpa tonnage FIBC nke mba ụwa
Akụ Fibc Akụkụ, Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Pp akpa Fibc, Akpa Jumbo Fibc, Nnukwu akpa Fibc, Ụdị akpa Fibc,